Maitiro ekuisa Openbox madingindira pane Linux? | Linux Vakapindwa muropa
Openbox inoshamisa maneja maneja, nemitauro yakawanda iripo. Nehurombo, nekuda kwekushambadzirwa kudiki kwainogamuchira, havasi vazhinji vashandisi veLinux vanoziva maitiro ekuisa OpenBox madingindira.
"Obconf" o Iyo Openbox Configuration Tool chishandiso icho vashandisi veLinux vanogona kuisa kuti vachinje akawanda marongero akasiyana muOverbox hwindo maneja.
Iine iyo vashandisi vanogona kushandura madingindira, chinja marongero edoko, nezvimwe. Chishandiso cheObconf chikamu chakakosha cheOpenbox, saka chero kugoverwa kweLinux iyo inototangisa kuendesa Openbox zviri nyore inofanira zvakare kuve neiyo Obconf chishandiso chinowanikwa pakuisirwa
Kuti uiise, vhura terminal uye shandisa yako package maneja kutsvaga "obconf".
Usati waisa madingindira matsva muOpenbox hwindo maneja, iwe unotanga kutanga waisa iyo Obconf chishandiso.
1 Kuiswa kweObconf paLinux
2 Kutsvaga uye kuisa misoro muOverbox
2.1 Muunganidzwa wenyaya
2.2 Mamwe marongero emusoro
Kuiswa kweObconf paLinux
Kuisa chishandiso pane yedu system, tinogona kuzviita zvakananga kubva kumatura edu kubvira Obconf inowanikwa mune dzakawanda zviripo zvekuparadzirwa kweLinux.
Isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye nekuita mimwe mirairo yatinogovana pazasi.Saka kune avo vari Vashandisi veDebian, Ubuntu kana chero kumwe kugovera kunobva pane izvi vanofanirwa kuita unotevera kuraira:
Kana vari Vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero imwe Arch Linux-based distro, tinoiisa ne:
Panyaya yeavo vari Fedora, RHEL, CentOS uye vanoshandisa zvigadzirwa vanofanirwa kunyora zvinotevera:
Chekupedzisira, kune avo vari vashandisi veimwe vhezheni yeOpenSUSE iwo iwo iwo murairo wavanoshandisa anotevera:
Kutsvaga uye kuisa misoro muOverbox
Kune nzvimbo dzakawanda uko vashandisi vanogona kuwana Openbox madingindira pamambure, saka pVachakwanisa kuwana misoro pane akasiyana masaiti.
Openbox madingindira anotorwa kubva kumawebhusaiti kazhinji anouya nenzira dzakasiyana dzakasiyana.
Mamwe mafomati ndiwo akanyorwa OBT fomati uye mamwe akatsimbirirwa mafaera ayo mushandisi anoda kuumbiridza nemaoko.
Sezvo ivo vakawana dingindira uye kuritora, ngatienderei mberi kuvhura iyo Obconf chishandiso uye sarudza iyo "Musoro" tab.
Mukati mebhu, tsvaga sarudzo "Isa musoro mutsva" uye chengeta pairi. Kubva pano, tichaenda kune iyo folda kwataimbo dhawunirodha theme yakasarudzwa uye neizvi isu tichafanirwa kuve nemusoro wenyaya kuwedzerwa kune yedu system.
Maitiro echipiri ekumisikidza Openbox madingindira, sezvataurwa pamusoro apa ndeyekunyora dingindira nemaoko.
Izvi dzimwe nguva zvinodikanwa sezvo vasiri vese vavaki vetimu yeOpenbox vanoisa iyo OBT faira kurodha pasi.
Neraki hazvitore nguva refu uye hazvisi izvo zvakanyanya kuomarara. Chaizvoizvo isu tinongofanirwa kurodha pasi yakadzvanywa uye mushure mekurodha pasi tinofanirwa kuburitsa dingindira, kazhinji izvi zvinouya mu zip kana tar.
Zvino sezvo zvese zvakabviswa, vhura iyo Obconf chishandiso uye tinya pane "theme". Tarisa pazasi pechikumbiro chebhatani «Gadzira theme theme (.obt)» uye tinya pairi. Uchishandisa iyo inotsvaga yefaira inowoneka, tsvaga iyo folda inokonzeresa kubva kune yakamboitwa dhizaini
Mune masekondi mashoma, Obconf inodhinda meseji inotaura kuti iyo nyowani musoro wenyaya 'yakagadzirwa kubudirira' Dzokera kuObconf uye sarudza iyo "Isa nyowani theme" bhatani.
Pano isu tinoshandisa iyo faira browser zvakare kuwana iyo nyowani OBT faira. Ndokumbira utarise kuti aya mafaera matsva ivo vanowanzo chengetwa mu / imba / zita rekushandisa /.
Mamwe marongero emusoro
Mukati medzimbo ino, vashandisi vanogona kuchinja akasiyana Openbox WM marongero. Kuchinja nzira iyo Openbox inobata miganhu, mifananidzo pakati pezvimwe zvinhu.
Izvo izvo ivo vachakwanisa kusvika pakuziva mashandiro ayo nekugadzirisa iwo maitiro ayo ainayo.
Paunenge wagutsikana neshanduko idzi, tinya bhatani re "kuvhara" pazasi kuti ubude.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa Openbox madingindira pane Linux?
Chaizvoizvo hazvidi kuti ugadzire iyo .obt faira isu taizongofanirwa kurodha pasi tema uye unzip zip mu ~ / .themes
Sep, ndozvazviri. Pfungwa yakanaka.
Ah, ini ndakanganwa: Chakanakisa chinyorwa. Kune akawanda akasarudzika uye akasarudzika sarudzo, asi neOpenbox ndinogutsikana uye ndakagadzikana. Yakapusa, yakajeka, inokurumidza. Icho chikuru WM.